बलात्कारको गलत रिपोर्ट दिने २ डाक्टरलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन सरकार? – PathivaraOnline
Home > समाचार > बलात्कारको गलत रिपोर्ट दिने २ डाक्टरलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन सरकार?
धनुषा, असोज ११ । बालिका बलात्कारमा गलत रिपोर्ट दिने दुई डाक्टरलाई धनुषाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कारबाही सिफारिस गरेका छन् । ती डाक्टरले बलात्कार नै नभएको रिपोर्ट दिएका थिए । जनकपुर अञ्चल अस्पतालका डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतलाई कारबाही सिफारिस गरिएको हो । उनीहरूलाई कारबाहीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र पठाएकाे छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल काउन्सिल र गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले बताए । उनीहरूले धनुषाको जनकन्दनी गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया बालिका बलात्कारसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणको गलत रिपोर्ट दिएका थिए ।
त्यसो त जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा परीक्षणका लागि शवको अंगको नमुना र भिसेरा संकलन सरसफाइकर्मीले गर्ने गरेका छन् । जनकपुर अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिवेक्षक डा। रामपरीक्षण यादवले शवको पोस्टमार्टम गर्दा भिसेरा निकाल्ने र चिरफारपछि शवको सिलबन्दी गर्ने काम सरसफाइकर्मीले नै गर्ने गरेको स्वीकार गरे । तालिमप्राप्त सफाइकर्मीले सो काम गर्दै आएको यादवको दाबी छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
जाँडकाे तालमा १० बर्षिया बालिका श्रृयाकाे बलात्कार पछि हत्या गर्नेलार्इ यसरी सार्वजनिक गरियो
चिनले कोरोना खोप बनाएसङ्गै, आज ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य !